Ngabe ufisa ukubala inani lokusekelwa kwengane? Singakusiza
Umthetho Wesehlukaniso » Ukusekelwa kwabantwana
Ngabe wena nomlingani wakho wangaphambili ninazo izingane ndawonye? Ngemuva kwalokho ukusekelwa kwengane kuyingxenye ebalulekile yezivumelwano zezezimali okufanele zenziwe ngesikhathi senqubo yesehlukaniso. I-alimony yezingane inani lelo umzali ongeyena umhlengikazi anomthelela ekunakekelweni nasekhulisweni kwezingane.
NGABE UFUNA UKUXELWA KWABASEKHAYA BABANTWANA?
> Izinga lokusekelwa kwengane
> Ibala ukwesekwa kwengane
> Ukushintsha ukusekelwa kwengane
Izinga lokusekelwa kwengane
Ngokubonisana, wena nomlingani wakho wangaphambili bangavumelana ngenani le-alimony yezingane. Lezi zivumelwano zizobekwa phansi ohlelweni lokuba ngumzali. Uma ungakwazi ukufinyelela esivumelwaneni ndawonye, ​​omunye wabameli bethu angajabula ukukusiza. Singasiza ngenqubo yokuxoxisana, ukunquma inani le-alimony yengane futhi wakhe uhlelo lokuzala. Siphatha ukunqunywa kokusekelwa kwengane ngokwenza ukubala kokugcinwa kwesondlo.
Ijaji ngeke libheke kuphela isimo sezezimali salowo othola ukusekelwa kwezingane, kodwa futhi nesimo sezezimali salowo okhokha izingane nge-alimony. Ngokwesisekelo salezi zimo zombili, inkantolo iyobe isinquma inani le-alimony yezingane.
Ibala ukwesekwa kwengane
Ukubalwa kokulungiswa kwesibalo kuyinkimbinkimbi kakhulu ngoba kufanele kubhekwe izinto eziningi. Law & More uzokuthokozela ukufeza ukubalwa kwesondlo kwakho.
Okokuqala, izidingo zezingane kumele zinqunywe. Kususelwa emalini engenayo njengoba yayinjalo ngaphambi kwesehlukaniso. Uma kunezindleko ezikhethekile, njengesikole samazwe noma ukunakekelwa kwengane, izindleko zingandiswa ngokufanele.
Lapho izidingo zezingane sezithathiwe, ukubalwa kokuthwala imithwalo kwenzelwa womabili amaqembu. Lokhu kubalwa kunquma ukuthi umuntu onecala lesondlo unemithamo eyanele yezimali ukuze akwazi ukukhokha i-alimony. Ukuze unqume umthamo wezezimali womuntu okufanele akhokhe i-alimony, imali ayitholayo kufanele iqale inqunywe. Impesheni yengane ihola imali eyisisekelo, icubungula yonke imithombo yemali, efana neholo, inzuzo kanye nesabelomali esihlanganiswe ingane.
Umzali okufanele akhokhe i-alimony futhi oxhumana nezingane uyoba nezindleko zokunakekelwa kwezingane. Lokhu kufaka izindleko zokuthenga, ukushayela emuva naphambili. Ngokomthetho, iphesenti elithile lezindleko lifakiwe ekubalweni
Inani lamaphesenti ancike enanini lezinsuku ezivakashelwa ngeviki. Umzali onakekelayo izindleko zokunakekela ingane usuku olulodwa ngesonto, ngokwesibonelo uthola isaphulelo sokunakekelwa kwe-15% kuthi umzali onakekela ingane izinsuku ezintathu ngesonto athola isaphulelo sokunakekelwa okungama-35%.
Isinyathelo sokugcina sokubala ukuphakama kokuxhaswa kwengane ukwenza i-equation ethwele umthwalo. Kulesi sibalo, izindleko zezingane zihlukaniswe phakathi kwakho nomlingani wakho wangaphambili ngokulingana nezindlela zabo zokusekelwa. Umthamo womuntu onelungelo lesondlo uqhathaniswa namandla omuntu okufanele akhokhe isondlo. Ngemuva kwalokho, noma isiphi isaphulelo sokunakekelwa sizosetshenziswa futhi silungiswe lapho kunesidingo. Ububanzi bokusekelwa buhloselwe ikakhulu ukusekelwa kwengane. Uma kusekhona indawo ngemuva kwalokho, umahluleli anganquma ne -onyony ye-net.
Ungathanda ukwazi ukuthi isimo sakho sezezimali sizobukeka kanjani ngemuva kwesehlukaniso sakho? Sicela uxhumane Law & More futhi ngokubambisana singanquma ukuthi kufanele ukhokhe noma uthole ukwesekwa okungakanani kwengane.
Ukushintsha ukusekelwa kwengane
Uma kungenzeki ukushintsha i-alimony yezingane ngokubonisana nalowo obethandana naye, singakuthumela isicelo soshintsho enkantolo. Lokhu singakwenza uma kunezimo eziguquliwe noma uma, ngokusho kwakho, inkantolo inqume ukuthi imali yesondlo igcinwe kulwazelelo lwangempela ngesisekelo semininingwane engalungile noma engaphelele.
Ungacabanga ngalezi zimo ezilandelayo, ngokwesibonelo:
• ukuxoshwa noma ukungasebenzi
• Ukususwa kwezingane
• umsebenzi omusha noma ohlukile
• phinda ushade, uphinde uhlanganyele noma ungene ebambiswaneni elibhalisiwe
• Ukushintshwa kohlelo lokuxhumana